Isweydaarsiga iyo Soo Celinta Siyaasadda
Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay iibsigaaga BodyBuiltLabs. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ku faraxsanayn iibsashadaada, ama aysan ka soo bixin shuruudahaaga, waad noo soo celin kartaa.
Alaabada waa in lagu soo celiyaa xaaladoodii hore iyo baakidhkoodii, 14 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda aad heshay. Waxaan kuu soo bandhigi karnaa sarrif ama lacag celin buuxda qiimaha aad bixisay.
Haddii aad alaab noogu soo celinayso maxaa yeelay waa khalad, waxaan kaliya kuu soo celin doonnaa kharashaadkaaga boostada haddii sheygu ku qaldan yahay qaladkeena annaga oo aan ahayn haddii sheyga si qaldan adigu u dalbatay.
Nidaamkan lacag celinta ma saameyn doono xuquuqdaada sharciga ah.
Fadlan ogow: Soo celinta iyo isweydaarsiga siyaasaddu waxay la xiriirtaa oo keliya iibsashada internetka mana khusayso iibsiyada laga sameeyay dukaanka.
Waxaan kugula talineynaa inaad ku soo celiso alaabada qaab caymis iyo raad raadin, sida gudbinta Royal Mail Recorded. Fadlan xusuusnow inaad hesho caddeyn risiidhka boostada. Fadlan ogow inaanan masuuliyad nala saari karin wixii shey ah ee lagu waayo boosta oo na soo gaarin. Haddii aad isticmaasho Royal Record Recorded ama Gaarsiinta Gaarka ah waad hubin kartaa haddii aan ku helnay baakaddaada adoo adeegsanaya bogga 'Royal Mail website track' iyo raadraaca.
Si aad noogu suurta geliso inaanu u shaqeyno soo noqoshadaada si hufan, fadlan u soo dir qoraal daboolaya baakadda. Pease sharax inaad rabto sarrif ama lacag celin, sababta aad u laabaneyso, iyo xusuusnow inaad ku darto nambarkaaga dalabkaaga iyo faahfaahinta xiriirkaaga shaqsiyeed si aan ula xiriirno haddii ay jiraan arrimo.
Markii aan helno badeecad nalagu soo celiyey oo aan ku qanacsanahay xaaladdeeda iyo sababta soo noqoshada, waxaan ka shaqeyn doonnaa soo celintaada inta qaddarka ah ee lagu bixiyay shayga iyadoo la isticmaalayo isla qaab bixinta iyo koontada markii hore loo adeegsaday iibsiga .
Fadlan ogow: haddii aad soo celiso shay la beddelay oo lacag celin ah markaa waxaan xaq u leenahay inaan ka qaadno khidmadda maamulka administration 10 si aan ugu daboolno kharashyada boostada dheeriga ah.
+ SOO CELI Su'aalaha SIYAASADDA
Ma muhiim baa in la buuxiyo foomka soo celinta?
Waxaan si adag kugula talineynaa inaad buuxiso foomka soo celinta. Fadlan ogow haddii shay la soo celiyo iyadoon la helin foom soo celin markaa waxaan kula soo xiriiri karnaa taleefan ama emayl si aan u ogaanno sababta ku noqoshada. Haddii aanaan war kaa helin 30 maalmood gudahood waxaan xaq u leenahay inaan shayga kuu soo celino ama haddii sheygu u qalmo, ka shaqeeyo ka-soo-celinta laga jaray administration 10 khidmadda maamulka.
Adeeggee ah inaan u adeegsado soo celinta shay?
Waxaan kugula talineynaa inaad ku soo celiso alaabta habka caymiska iyo raadraaca, sida Royal Mail Recorded ama Delivery Gaarka ah. Fadlan xusuusnow inaad hesho caddeyn risiidhka boostada. Fadlan ogow inaanan masuuliyad nala saari karin wixii shey ah ee lagu waayo boosta oo na soo gaarin. Haddii aad isticmaasho Royal Record Recorded ama Gaarsiinta Gaarka ah waad hubin kartaa haddii aan ku helnay baakadkaaga adoo adeegsanaya bogga Royal Mail bogiisa iyo raadkiisa.
Mudo intee le'eg ayay qaadan doontaa in lacagtayda la hawlgeliyo?
Fadlan u oggolow ilaa 10-15 maalmood oo shaqo ka dib marka la helo dhammaan soo celinta iyo is-weydaarsiga in laga shaqeynayo. Haddii aadan ku soo celin lacagtaada 15 maalmood oo shaqo gudahood markii aan helnay alaabtaada, fadlan nala soo xiriir adigoo email u diraya sales@bodybuiltlabs.co.uk.
Intee in le'eg ka dib iibsigeyga ayaan soo celin karaa shay?
Fadlan hubso inaad ku soo celiso alaabtaada (alaabtaada) 30 maalmood gudahood markii aad iibsatay.
Haddii walxaha la soo celiyo waqtigan ka dib waxaan ku jirnaa xuquuqdeena inaan diidno lacag celin laakiin waxaa suuragal ah inaan diyaar u nahay inaan bixinno is-weydaarsi, iyadoo la raacayo sheyga xaaladdiisa aan fiicnayn. Alaabada waa in lagu soo celiyaa isla xaaladdii loo soo diray.
Ka waran haddii alaabtaydu dhaawacan tahay ama cilladaysan tahay?
Haddii ay dhacdo in ay dhacdo in aad hesho shey dhaawacan ama aan ahayn kii aad dalbatay markaa waad noogu soo celin kartaa iyada oo bilaash ah sarrifka ama soo celinta buuxda 30 maalmood gudahood markii aad heshay.
Ka waran haddii aan rabo inaan soo celiyo shay laga soo iibsaday goobta lacagta lagu shubo?
Waxyaabaha laga soo iibsado degellada lacag celinta waxaa lagu soo celin karaa isla isla muddadaas 30 maalmood ah, laakiin dib u soo celinta lacagta laguma bixin doono amarradan.
Kawaran haddii aan ku helo hadiyad bilaash ah iibintayda?
Haddii aad rabto inaad soo celiso shay la yimid hadiyad bilaash ah, waa inaad ku soo celisaa hadiyaddaada bilaashka ah shaygaas.
+ SU'AALAHA SIYAASADDA ISBADALKA
Waxaan si farxad leh u badali doonaa sheygaaga illaa inta lagu soo celinayo xaalad nadiif ah oo aan qancino shuruudaha soo celinta shay sida ku cad Siyaasadeena Soo Noqoshada ee kor ku xusan.
Sida shey laysku weydaarsado
Raac isla nidaamka lagu qeexay siyaasada soo celinta. Fadlan buuxi foomka celinta oo noo sheeg sheyga aad rabto inaad ku beddelato iyada oo ay la socdaan faahfaahinta xiriirka ee khuseeya, haddii aan u baahanno inaan kula soo xiriirno.
Maxaa dhacaya haddii farqi u dhexeeyo qiimaha?
Haddii ay jirto lacag dheeraad ah oo la bixinayo, waan kula soo xiriiri doonaa si lacagta loo bixiyo.
Haddii ay jirto lacag celin qeyb ahaan markaa tan waxaa laguugu soo celin doonaa kaarkii aad u isticmaashay macaamilkii asalka ahaa ee bixinta amarka laguugu soo celin doono 30 maalmood gudahood.
Ma waxaa jira khidmad maamul?
Haddii aad wax ku beddeleyso shay qiime ka hooseeya markaa waxaan xaq u leenahay inaan ku darno administration 10 khidmadda maamulka sicirka sheyga beddelaadda. Haddii ay arintu sidan tahay, waan kula soo xiriiri doonnaa si aan tan kuugu soo sheegno.